Apple haina kupotsa CES uye yakaita misangano yakati wandei neAugmented Reality makambani | Ndinobva mac
Uye inyaya inoita kunge iriko chaizvo mukambani yeCupertino kwenguva yakareba uye zviri pachena chiitiko che ukuru hweCES muLas Vegas, vakatadza kuzvipunyuka. Mune ino kesi, zvinopfuura kungosimbiswa kuti misangano yeApple vatungamiriri nevakagadziri vakasiyana veAugmented Reality zvigadzirwa -AR, kubva zvino zvichienda- zviri kufambira mberi uye nguva-yakasimba.
Hatina mubvunzo kuti ArKit inomiririra nhanho kumberi mune ino tekinoroji uye Apple iri pachena kuti kuve netsoka muchikamu cheAR kwakakosha kune chero kambani, yakawanda kana iri Apple. Izvozvi zvinoramba zvichionekwa kana zvichinyatso kupedzisira zvaitwa nenzira yemagirazi sezvo anga achingodzokororwa mune yakasarudzika midhiya kana kuti anongoshandiswa zvimwe zvinangwa.
Chero zvazvingaitika, zviri pachena ndezvekuti Apple, Google, Microsoft uye nemamwe makambani ayo nhasi anokwanisa kushandisa AR muzvigadzirwa zvavo kana mune zvigadzirwa zvemberi, shanyira zviitiko zvikuru izvi ku "Tora" semafungiro mazhinji, zvitsva uye zvigadzirwa sezvazvinogona.
Apple ine ramangwana rinovimbisa muchikamu chino uye ndezvekuti kugona kwekambani maererano nehupfumi uye kuvandudzwa kwetekinoroji nyowani kwakakosha. Apple inoenderera mberi kuyedza kusimudzira tekinoroji yatinayo nhasi inoenderana neAR, ichi chinhu chatinoziva tese chaizvo, asi zvakare chinoziva mafambiro ese anoitwa kutenderedza uye kwekutanga, makambani mahombe uye zvimwe zvitsva mu chikamu ichi. Tine chokwadi chekuti munguva pfupi paWWDC muna Chikumi tichava nenhau nezvazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple haina kupotsa CES uye yakaita misangano yakati wandei nemakambani eAugmented Reality